रवि लामिछानेको गाडी बालकोटतिर ड्राइभर्ट, चितवनमा चिढीको रविको मन प्रचण्ड ओली झगडामा फेरियो – Mukhundo.com
रवि लामिछानेको गाडी बालकोटतिर ड्राइभर्ट, चितवनमा चिढीको रविको मन प्रचण्ड ओली झगडामा फेरियो
mukhundo.com, २०७७ असार २३ मंगलबार
केही समय देखि चर्चा र विवादित बनेका संचारकर्मी रवि लामिछाने पछिल्लो समय फेरी विवादमा तानिएका छन् । उनले संचालन गरेको एक टेलिभिजन कार्यक्रमको एकको पोलमा उनले लेखेको शब्दहरुले उनको संचार कर्मको धेरै व्याख्या गरिरहुनु आवश्यक देखिदैन । केही समय अघि उनी सरकारको विपक्षमा उभिएका रवि पछिल्लो समय फेरी प्रधानमन्त्रीको पक्षधरको रुपमा देखा परेका छन् ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्माहत्या प्रकरणसंगै ओली सरकारसंग चिढिएका लामिछानेको गाडी फेरी बालकोट ड्राइबट भएका छन् । उनले हाम्रो पात्रोमा राखिएको गाली वा ताली शिर्षकको भोटीङ पोलमा राखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि हुनु पर्छ भन्नेले ताली बजाउनुस् ।
यो कुन अर्थमा राखिएको पोल हो ? यसमा उनले शब्द चयनमा ध्यान दिनुपथ्र्यो वा पर्दैनथ्यो त्यो उनको व्यक्तिगत विचारलाई छोडौँ भन्दा पनि यो मान्य हुदैन । एउटा जिम्मेवार संचारकर्मीले जसरी पनि जुनै हालतमा पनि आवश्यक छ भनेर टिकान गर्न मिल्छ या मिल्दैन त्यो बौद्धिक पत्रकारिताको विज्ञहरुले सुझाउनुहोला ।
तर यो भाषा र भोटिङ पोलमा प्रयोग भएको भाषा निराधार रुपमा विभेद र पक्षपाति छ ।
चितवनमा चिढिएका लामिछाने सानेपा हुँदै बालकोटसम्म
पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्माहत्या प्रकरणपछि कांग्रेससंग नजिक रहेका लामिछाने पछिल्लो समय ओली र प्रचण्डवीचको मतभेदमा राम्रो मलजल गर्ने पात्राको रुपमा हेरिएको नेकपा निकटका एक नेताले बताएका छन् । ओली नेतृत्वलाई भन्दा पनि प्रचण्ड विरुद्ध रविको धेरै असन्तुष्टि रहेको ती नेताको भनाई छ । पछिल्लो समय भिम रावल, रामकुमारी झाँक्री लगायतका नेता कार्यकर्ताले ओलीको साथ छोड्नुले पनि ओली निकट नेताहरुको जमात बढाउन लामिछाने सक्रिय बन्दै गएको तीनै नेताहरुको भनाई छ । तर चितवनमा रविलाई हिरासतमा लिएसंगै उनी नेकपाको सरकार विरोधी बनेका थिए र काँग्रेससंग निकट बनेका थिए । अहिले ओली निकट रहेर ओलीलाई साथ दिईरहेको लामिछाने निकट स्रोतको भनाई छ । यसरी हेर्दा रविले चलाएको गाडीको दिशा सानेपातिर भन्दा पनि बालकोटतिर सोझ्याएको देखिन्छ ।
ओली निकट रहनुका कारण….
रवि लामिछाने ओली निकटको हो भनेर जो कोहीले पनि अकालन गर्नु स्वभाविक नै हो । किनभने सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसंगको यात्रा ओलीसंगै मिलेर गरेका थिए । तर जब प्रचण्डले रविलाई उक्त कार्यक्रमबाट हटाए त्यसपछि लामिछाने प्रचण्ड विरुद्ध खनिएका थिए ।
जून उद्धाहरण चितवन महानगरपालिकाको निर्वाचनमा पनि प्रष्ट देखिन्छ । प्रचण्ड पत्नि सीता दाहालको उपचारका लागि अमेरिका लगिदै गर्दा पनि उनले विमानस्थलमा विरोध गरेका थिए । उसो त अहिले उनी चितवनमा पुडासैनी प्रकरणमा रविलाई हिरासतमा लिएसंगै ओली सरकारको विपक्षमा उभिएको न्यूज २४ कै पत्रकारहरुको तर्क छ ।
हिरासतबाट बाहिरिएसंगै उनी सानेपा नजिक भएका लामिछाने पछिल्लो समय सानेपा र ओलीको निकट रहेर सानेपा र बालकोटको पुल बन्दै आएको नेकपाकै नेताहरुको तर्क छ । अहिले ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नजिक गराउने वातारण निर्माणमा पनि केही भूमिका देखिएको नेताहरुको भनाई छ ।
ओलीको मृगौला फेर्दा चर्को विरोध गरेनन् ।
केही समयअघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक मृगौला फेरेका थिए । तर ओलीको मृगौला फेर्दा लामिछानेले खासै विरोध गरेनन् । विरोध गरे पनि त्यती धेरै गाली गर्ने तरिकाले गरेनन् जति प्रचण्ड पत्नि नेपालमा उपचार सम्भव छैन भन्दै अमेरिका जादाँ गरेका थिए ।
यसमा रविको सहनुभूती कहाँनेर रह्यो भने उनी अबैधरुपमा नेपालमा पत्रकारिता गर्दा ओलीले नै जोगाएका थिए । उनी गैर नेपाली नागरिक भएर नेपालमा रहेर पत्रकारिता गरिरहेको भन्दै सुचना विभाग, गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागमा उजुरी परेको थियो ।
तर उक्त उजुरीलाई ओलीले बाहिर ल्याउन दिएनन् । तर ओली चीन भ्रमणमा जाँदा यी तीनै निकायले एकसाथ एक्सन लिएका थिए । तर रविले हतार हतार अमेरिकी दुताबास गएर नागरिकता त्यागेका थिए । यसले पनि रवि र ओलीबीचको सम्बन्ध नजिक भएका हुन् । अहिले पनि रवि र ओलीवीचको सम्बन्धले फेरी मोड लिएका छन् ।
श्रमजीवीलाई घर पठाइयो र आफू राजनीतिमा हावी बने
अहिले विश्व कोरनाको कहरमा छ । नेपालमा पनि कोरनाको प्रभाव धेरै भएका छन् । यसले संचारक्षेत्र पनि आक्रान्त छ । यही बेला रवि कार्यरत टेलिभिजनबाट धेरै पत्रकारलाई कामबाट निकालेका छन् र निक्लेका पनि छन् । यसमा उनले टेलिभिजन व्यवस्थापन पक्षसंगै कुनै कुरा राख्न नचाहेको उनी निकटकै पत्रकारहरुको तर्क छ ।
उनी कार्यरत टेलिभिजनबाट अंगराज न्यौपानले, प्रमोद न्यौपाने लगायतका पत्रकारहरु सेवा सुविधा नदिएको र व्यवस्थापनले तलब भत्ता नदिएको भन्दै बाहिरिदा पनि उनले कुनै प्रस्ताव गर्न चाहेनन् । र श्रमजीवी पत्रकारहरुको मुद्धामा गम्भिर नबनेको धेरै पत्रकारहरुको तर्क छ ।
उसो त उनले केही समय अघि पत्रकारको परिचयपत्र लिनु भन्दा सडकमा बसेर जुत्ता पोलिस गर्छु भन्ने अभिव्यक्तिको ठीक उल्टो भएको छ । उनी मिडिया हाउसमा र अरुलाई चाँही सडकमा पठाएर त्यही अभिव्यक्तिको कार्यन्वयन गरिरहेको तर्क कतिपयको छ ।
Copyright July 7, 2020 Mukhundo.com Protected. All Rights Reserved.